Shirka safarka iimaanka ee ugu horeeya oo lagu qabanayo suunka Baybalka ee Ameerika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Shirka socdaalka caqiidada koowaad ee lagu qabanayo suunka Baybalka ee Ameerika
Shirka socdaalka caqiidada koowaad ee lagu qabanayo suunka Baybalka ee Ameerika
MILFORD, Connecticut - Unicomm LLC, oo ah soo saaraha bandhigga safarka, wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo iskaashiyo iyo taageerayaal cusub oo loogu talagalay Shirkeeda Imaatinka Socdaalka & Bandhigga loo qorsheeyay Oktoobar 22-23, 2011 at
MILFORD, Connecticut - Unicomm LLC, oo ah soo saaraha bandhigga safarka, wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo iskaashiyo iyo taageerayaal cusub oo ku saabsan Shirkiisa Imaatinka Socdaalka & Bandhigga loo qorsheeyay Oktoobar 22-23, 2011 at Atlanta's Cobb Galleria.
"Ma jiro munaasabad kale oo diiradda lagu saaray socdaalka caqiidada oo isku daraya shir ballaaran oo ay weheliso suuqyo kala duwan oo dalxiisayaasha dalxiiska ah iyo xafiisyada dalxiiska ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah si looga caawiyo hoggaamiyeyaasha kaniisadaha qorsheynta safarkooda soo socda," ayay tiri Guddoomiyaha Shirka Cindi Brodhecker, "Safarku waa wax weyn hadiyad ha noqoto safar hal maalin ah ama safar dheer oo lagu tagayo meelaha xiisaha u leh bulshada kaniisadda - waxaana munaasabadda loogu talagalay in si wanaagsan loogu qalabeeyo hoggaamiyeyaasha kaniisadaha aaladaha loo baahan yahay si safarkooda xiga ee kooxdu u badasho nolosha. ”
Dhacdadan oo ku taal bartamaha suunka Kitaabka Quduuska ah, munaasabadda waxaa la filayaa inay kulmiso wadaaddo, hoggaamiyeyaasha kaniisadaha, macaamiisha masiixiyiinta ah, wakiillada safarka ku saleysan diinta, iyo alaab-qeybiyeyaasha safarka. Diiradu waxay saarnaan doontaa muhiimada ay u safreyso bulsho iimaan leh, hadey ahaan laheyd is weheshi, koboc ruuxi ah, howl howl, ama dhacdooyin dib u gurasho.
Gigi Graham, oo ah qoraa iyo gabadha Billy Graham, oo ka soo qeyb gali doonta xafladda, kama fikiri karto wax ka faa iid badan safarka. Waxay tiri, “sameynta saaxiibo cusub, wadaagida nolosheena iyo waaya aragnimadeena, is dhiirigelinta, isu duceynta midba midka kale, iyo inaan si wada jir ah u wada qosolno intaan safrayno waa isha barakada dhabta ah. Waxaan ogaaday in safarku yahay mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wanaagsan ee lagu balaadhin karo aragtidayda, si aan waxyaabo uga arko dhinacyo kale una koboco qof ahaan, xagga caqliga iyo ruuxi ahaanba. ”
Sam Henderson, Wadaadka Marietta iyo aasaasaha Istaraatiijiyada Jump-Start, ayaa sidoo kale ka qayb galaya munaasabadda. Wadaad ahaan, inta badan waxaan goobjoog u ahaa isbadal xoogan oo ku yimid shaqsiyaadka iyadoo loo marayo himilooyinka barashada iyo safarada adeega. Waxaan rumeysanahay in shirkan uu bixin doono aragti, xiriir, iyo qalab lagu caawinayo ka warqabka himilada adduunka iyo u dhaqaaqista aniga ahaan hogaamiye ahaan iyo dadka iimaanka leh. ”
Margo Carter, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Desert Sands Travel, oo iyadu qabanqaabisa qabanqaabada socdaalka ee loogu talagalay xubnaha Chicago ee Living Word Christian Center ee 19,000 xubnood ah, ayaa ku faraxsan imaatinka xafladda. "Aniga oo ah wakiilka safarka ee u adeega dadka iimaanka ah, waxaan dareemayaa in Shirka Socdaalka ee Iimaanka & Expo ay tahay fursad aad u fiican oo aan kula xiriiri karo iibiyeyaasha kale ee u adeega isla awooda ama bulshada mu'miniinta ah, iyadoo la wadaagi karo khibradaha iyo adeegyada." Way sii wadatay, "Xiriirintani waxay ii oggolaanaysaa inaan u adeego heer kale, taas oo ah wax ereyga Eebbe naga filayo inaan sameyno."
Si looga caawiyo in fariinta loo gaarsiiyo hogaamiyaasha kaniisadaha iyo macaamiisha masiixiyiinta ah, munaasabadu waxay xaqiijisay Leading Christian Media Publications Ministry Today iyo Charisma, oo ay daabacday Charisma Media, oo ah Masuulka Rasmiga ah ee Warbaahinta. “Sharaf ayey u tahay Charisma Media inay la shaqeyso Faith Travel Conference & Expo,” ayuu yiri Steve Strang, oo ah madaxa Charisma Media, “Waxaan ku faraxsanahay inaan xiriir cusub la sameyno warshadan muhiimka ah. Waxaana rabnaa inaan u isticmaalno barnaamijyadeenna warbaahineed inaan ku tusno boqolaal kun oo Masiixiyiin ah sida loo helo khibrado safar oo cusub.
Maalgeliyeyaasha kale ee waaweyn waxaa ka mid ah: American Airlines, Israel ee Wasaaradda Dalxiiska, Golaha Dalxiiska Dowladda Talyaaniga, Puerto Rico Dalxiiska Dalxiiska, Dalxiiska Ireland, Dalxiiska Switzerland, Xarumaha Shirka Lifeway, Ridgecrest iyo Glorieta, iyo Xafiiska Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Turkiga. Kalluunka 104.7, WNIV Atlanta's Christian Talk Station, iyo Ammaanta 102.5, Guriga Atlanta ee loogu talagalay Bulshada Injiilka, ayaa ah maal-galiyeyaasha raadiyaha. Safarka Kooxda Leisure waa daabacaadda rasmiga ah ee Safarka Kooxda, iyo Fikradaha Infinity waa Iskaashatada Suuqgeynta.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Shirka Socdaalka ee Iimaanka & Expo, fadlan booqo www.faithtravelexpo.com ama kala xiriir Melanie Flavin lambarka 203-713-1080 ama emaylka [emailka waa la ilaaliyay]
KU SAABSAN UNICOMM
Unicomm, LLC wuxuu soo saaraa taxanaha Bandhigga Safarka & Tacliinta guud ahaan waddanka oo dhan ee New York, Chicago, Washington DC, Dallas, Atlanta, Los Angeles, iyo Aagga San Francisco Bay, oo soo jiita macaamiil ka badan 100,000 iyo 2,700 ganacsi safar sanad kasta. Intaa waxaa dheer, Unicomm, LLC sidoo kale waxay soo saartaa Shirka 'Travel Travel Faith & Expo', oo ah hoggaanka iimaanka safarka. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo bogga Bandhigga Safarka & Tacliinta ee www.adventureexpo.com.